Ahoana ny fomba hanovana ny sary .bmp ho .jpg | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fomba hanovana ny sary .bmp ho .jpg
Ireo lahatsoratra ao amin'ny ChrisADR Tena tsara izy ireo ary nanana fanekena tsy nampino, na izany aza, tamin'ny lahatsorany voalohany dia nampiasa sary izy .bmp izay mazàna mandray habaka kapila mihoatra ny sary .jpg, izay nanakana ireo mpampiasa manana fifandraisana miadana tsy hankasitraka ireo sary nameno ny asa soratr'izy ireo, noho izany dia mila mianatra aho ovay ny sary .bmp ho .jpg, ary na dia misy fomba maro hanaovana azy aza, ny tsotra indrindra dia ny fampiasana ilay fitaovana mogrify ny fonosana ImageMagick.
1 Inona no atao hoe mogrify?
2 Ahoana ny fomba hanovana ny sary .bmp ho .jpg?
Inona no atao hoe mogrify?
Ny fitaovana mogrify Tena mahaliana izany amin'ny toerana itodihanao azy, satria izy io Fitaovana manokana amin'ny fanodinana sary, izay ahafahantsika manova ny habe, ny famaohana, ny fikolokoloana, ny maizina, ny fanaovana sary, ny fisintahana, ny fanatevenana, ny fanodinana ireo dingana amin'ny sary, ankoatry ny hafa.
Ny fitaovana mogrify dia mandray ny sary tany am-boalohany ary, arakaraka ny mason-tsivana ampiasainay izay manondro ny sary miaraka amina misy valiny andrasana, izany rehetra izany amin'ny fomba haingana sy mangarahara ho an'ny mpampiasa.
Ity fitaovana ity dia misy ao amin'ny rindrambaiko suite Imagemagick de mamela anao hamorona, manova, ary manoratra sary avy amin'ny tsipika baiko nefa tsy mila fampiharana sary. Azo jerena ny antontan-taratasy ofisialin'ny fampiasana sy ny fampiasa mogrify Eto na amin'ny fanatanterahana ny baiko avy amin'ny console mogrify -help.
Ahoana ny fomba hanovana ny sary .bmp ho .jpg?
Araka ny voalaza etsy ambony, teratany mogrify mamela ny fiovan'ny sary, iray amin'ireo endrika avelany hiova dia .bmp mankany .jpg ary ny mifamadika amin'izany, isika dia afaka manao an'io ho an'ny sary sy ho an'ny andiany iray, ankoatr'izay, miaraka amin'ny masontsivana -format azontsika atao ny milaza amin'i mogrify mba tsy hanolo ireo sary tany am-boalohany fa hamorona sary vaovao.
Raha toa ka fanovana marobe ny .jpg ho .bmp sary mandehana fotsiny any amin'ny lahatahiry misy ireo sary tany am-boalohany ary manaova ity baiko manaraka ity:
mogrify -format jpg * .bmp
Ny sary vaovao dia haterina ho azy miaraka amin'ny anaran'ny sary tany am-boalohany fa miaraka amin'ny endrika voatondro sy amin'ny fiovam-po tsirairay avy. Toy izany koa, azonao atao ny mampihatra an'io fomba tsotra io amin'ny endrika sary maro samihafa.
Fampianarana tsotra fa afaka mamaha ny ain'ny mihoatra ny iray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Ahoana ny fomba hanovana ny sary .bmp ho .jpg
ChrisADR dia hoy izy:
Tsara loatra ilay lahatsoratra
Valiny amin'i ChrisADR
Misaotra anao tamin'ny asa tsara toy izany !!!
Indraindray i PNG (loko marimaritra sy mitovy fanamiana fitifirana varavarankely fampiharana) dia tsara kokoa noho ny JPEG (tsara indrindra ho an'ny sary azo tanterahina). Noho ny habe farany sy ny fatiantoka kalitao nijaly tamin'ny .jpeg.
Fitaovana mogrify tsara, iray hafa iray hafa ao amin'ilay fonosana ImageMagick ihany no niova fo:
ny baiko dia samy manao zavatra mitovy betsaka, fa ny mogrify matetika dia manorotoro ny sary tany am-boalohany ary mamorona sary vaovao ny mogrify.
Manamora ny fanovana ny haben'ny sary rehetra ao anaty fakan-tsary ho an'ny mailaka taty aoriana kokoa raha hatao amin'ny mogrify:
miaraka amin'ny mogrify: mogrify -resize 25% .jpg
miaraka amin'ny hiova ho script: ho an'ny sary ao * .JPG; ataovy izay hanovana -resize "33% x33%" $ image RES $ image; vita
Avelako ho anao ireo safidy nampiasako niaraka tamin'ny niova fo:
Ahodino sary eo am-panaovana kopia azy amin'ny lahatahiry: ahodina -rotate -90 * .JPG ahodina / ahodino
Omeo azy ireo ny famirapiratana sy ny fifanoherana amin'ny alàlan'ny fandikana ny valiny amin'ny lahatahiry: ahodina -brightness-contradicit 20x + 40 ahodina mamirapiratra / mamirapiratra
Mamorona PDF miaraka amin'izy rehetra: manova * todo.pdf
Hetezo ny sombin'ilay sary: ​​avy eo ankavia: 126 sy ambony: 56 miaraka amin'ny sakany lafiny: 912, hahavony: 624
niova -crop 900 × 624 + 126 + 56 C * .png J.png
Betsaka ny azo atao, mamorona sary beveled ho an'ny sary, sns.
Lahatsoratra mahafinaritra ho an'ny roa, ny iray ho an'ny mpijery ankapobeny kokoa ary ny iray hafa ho an'ny mpahay siansa momba ny informatika.
cusa123 dia hoy izy:
Toerana tsara hanontaniana ny fomba hamahana ny "Error mandika ny fisian-tsary JPEG (Tsy rakitra JPEG: atomboka amin'ny 0xff 0xff)"
Mamaly an'i cusa123
Maninona isika no manohitra ny interface graphique? Mety ho sarotra be ve ny mampandroso ary mila ezaka be? fa ny zavatra sarotra kokoa dia tsy midika hoe mahomby kokoa, indraindray tsara kokoa ny maka fomba fohy indrindra sy mora indrindra raha toa ka mihodina maro ny lava indrindra
KXStudio: The Distro ho an'ny Professional Audio Producers
Ahoana ny fametrahana modules ao amin'ny Odoo 8